Olee otú igwu egwu YouTube vidiyo na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ r
I nwere ike ime a otutu na VLC Media Player na otu n'ime ihe ndị ahụ bụ nakwa na ị nwere ike igwu ọ bụla YouTube video gị oke na iji VLC Media Player. Gịnị mere ị ga-achọ ime na mgbe i nwere ike ime otu ihe ahụ na YouTube? Ọfọn maka ihe dị otú ahụ dị ka mma achịkwa nsụgharị nke video na audio, mma-achọ njikwa wdg Agbanyeghị, ka anyị ngwa ngwa hụ nzọụkwụ onye nwere ka na-eso na-enwe ike ime nke a.
Part 1: Play YouTube videos ozugbo na VLC Media Player
Part 2: Watch dum YouTube listi ọkpụkpọ na VLC Media Player
Part 3: Olee otú ibudata a YouTube video iji VLC
Part 1: Play YouTube videos ozugbo na VLC Media Player (Windows na Mac)
Mepee YouTube video na ị ga-achọ ịhụ na ihe ọ bụla nke nchọgharị ị nwere na idetuo njikọ na video si adreesị mmanya na ihe nchọgharị gị.
Ugbu a, na-emeghe VLC Media Player na kọmputa gị ma pịa Ctrl + N, a kwesịrị imeghe a popup window akpọ Open Media maka gị. Na ngalaba na-ekwu Biko tinye a netwọk URL: pinye njikọ na video na unu depụtaghachiri mbụ na kụrụ Tinye ma ọ bụ họrọ Gwuo na ala.
Ugbu a, VLC kwesịrị-egwu video na sekọnd ole na ole mgbe unu rụrụ Nzọụkwụ 2.-enwe!
Part 2: Watch dum YouTube listi ọkpụkpọ na VLC Media Player (Windows na Mac)
Gaa na YouTube playlist on a nchọgharị window na idetuo njikọ na playlist
Ugbu a, na-agba ọsọ VLC Media Player na kọmputa gị na-aga ele> Playlist ma ọ bụ pịa Ctrl + L. Nke a kwesịrị imeghe ngalaba Playlist n'ihi na ị nke kwesịrị efu n'ebe a.
Dị ka anyị mbụ mere, ugbu a, pịa Ctrl + N imeghe ngalaba Open Media on VLC na ebe a na mado na mbụ depụtaghachiri YouTube playlist njikọ. Na, pịa bọtịnụ Play ma ọ bụ Tinye. Ka anya dị ka ị na-eme nke a, VLC Playlist kwesịrị-emelitere na niile videos na YouTube playlist na VLC kwesịrị ịmalite ịkpọ egwu ha sequentially obere oge.
Nkebi nke 3: Olee otú ibudata a YouTube video iji VLC (Windows na Mac)
Mepee YouTube on a nchọgharị na weebụ.
Chọta video ị ga-achọ ibudata na idetuo ụzọ nke na video si nchọgharị gị adreesị mmanya.
Ugbu a, na-amalite VLC Media Player na kọmputa gị na pịa CTRL + N igodo. Ọ ga-emeghe elu ọhụrụ window n'ihi na ị kpọrọ Open Media. Tapawa video ụzọ na ị depụtaghachiri na mbụ na ngalaba na-ekwu, 'Biko tinye a netwọk URL:' ma họrọ Gwuo.
> Resource> Video> Olee otú igwu egwu YouTube vidiyo na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ